Apostle Talent Chiwenga involved in accident – Report Focus News
Zimbabwe controversial pastor Apostle Talent Chiwenga was involved in an accident which has allegedly claimed the life of his wife near Chatsworth turnoff at the 80 km peg along the Harare-Masvingo highway this afternoon.
National police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi confirmed the accident but said he was yet to get full details.
Apostle Chiwenga is on record confronting the Emmerson Mnangagwa government and declaring that the senior leaders in government will die.
Recently Chiwenga said he will approach Zimbabwe President Mnangagwa and confront him at his office.
In a letter written to Mnangagwa on May 27, 2019, Chiwenga said:
Zimbabwean Government threatens NGOs
Harare-The Zimbabwean Government has threatened to.
BULAWAYO, Zimbabwe – Soldiers and police.
Four more months of economic pain, warns Zimbabwe’s Finance Minister
HARARE – Zimbabwe’s government said it.
Zimbabwe police ban another opposition protest
Zimbabwe police have banned a planned.
Zimbabweans deserve help, leaders don’t
After decades of mismanagement and corruption,.
New SADC Chairman calls for the West to lift sanctions against Zimbabwe
Tanzania president John Magufuli, the new.
Zimbabwean Government threatens NGOs August 19, 2019
Police and soldiers deploy in Bulawayo as opposition challenges protest ban August 19, 2019
Four more months of economic pain, warns Zimbabwe’s Finance Minister August 19, 2019
Zimbabwe police ban another opposition protest August 19, 2019
Zimbabweans deserve help, leaders don’t August 18, 2019
Nelson Chamisa to visit Russia, China to ask help in settling Zimbabwe’s political crisis August 17, 2019
Zimbabwe Police Arrest 128 Demonstrators in Opposition Protest August 16, 2019